Zayar : March 2013
အခြားဆောစ့်ဝဲလ်တွေက အသုံးပြုတဲ့အခါ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်သွားပြီး ပြန်ဖွင့်လာမှအလုပ်လုပ်ပါတယ်
သူကတော့ ပိတ်စရာမလိုပါဘူး ဒီအတိုင်း Speed Up လုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်
ကွန်နက်ရှင်နှေးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် အဆင်ပြေပါစေဗျာ
Like · · Share · 115 · 21 minutes ago ·
Posted by zayar htut at Monday, March 25, 2013 No comments: Links to this post
အတော်လေးစုံတာမို့ဖလမ်းဖလမ်း လို့ ပြောတာပါ မယူရသေးသူများ
ယူသုံးကြည့် mediafire နဲ့Zippyshare ၂ခုလုံးက တင်ထားပါတယ်
Posted by zayar htut at Thursday, March 21, 2013 No comments: Links to this post
Android ဖုန်း/Tablet တွေထဲကနေ Youtube video တွေကို download ရယူချင်သူတွေအတွက် TubeMate for Android နောက်ဆုံး version လေး v1.05.47
Android ဖုန်း/Tablet တွေထဲကနေ Youtube video တွေကို download ရယူချင်သူတွေအတွက် TubeMate for Android နောက်ဆုံး version လေး v1.05.47 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Youtube Wesite ကနေ မိမိတို့ download ရယူချင်တဲ့ youtube video တွေကို TubeMate ဆော့ဝဲလေးကိုအသုံးပြုပြီး video quality အမျိုးမျိုးနဲ့ download ရယူနိုင်မှာပါ။ TubeMate v1.05.47 for Android (Youtube video downloader) ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
TubeMate v1.05.47 for Android (Youtube video downloader)
Android ဖုန်း/Tablet တွေထဲကနေ Youtube video တွေကို download ရယူချင်သူတွေအတွက် TubeMate for Android နောက်ဆုံး version လေး v1.05.47 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Youtube Wesite ကနေ မိမိတို့ download ရယူချင်တဲ့ youtube video တွေကို TubeMate ဆော့ဝဲလေးကိုအသုံးပြုပြီး video
Posted by zayar htut at Wednesday, March 20, 2013 No comments: Links to this post
Java ဖုန်းအတွက်ပါ File size ကလည်းသေးသေးလေးနဲ့ စကားလုံးများစွာပါဝင်ပါတယ်။ စကား
လုံးပေါင်း 30000 ကျော်ကို English မှ မြန်မာသို့ ဘာသာပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by zayar htut at Monday, March 18, 2013 No comments: Links to this post
စက်ရုပ်ရဲ့ ပထမဆုံး နှစ် ၁၀၀ ပြက္ခဒိန်ပါ။ 1901-2016 အထိ။ သင့် ဖုန်းကို မူရင်းအတိုင်း ဘာမှ ပြုပြင်ရန် မလိုပါ။ အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ပြီး သုံးရန်မလို။
ရှေလနှင့် နောက်လကို slide လုပ်ပြီး ပြောင်းပါ။ စာလုံး အကြီးအသေးကို A နှင့်aနှိပ်ပြီး၊ လိုသလို ပြောင်းယူပါ။ နေရက်ရဲ့ အသေးစိတ်ကို သိလိုက အဲဒီနေပေါ်မှာ ကြာကြာ ဖိပေးထားပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက တော့ Samsung တန်းဖိုးကြီး ဖုန်းတွေ မှာ ပါတဲ့ multiwindow ပုံစံ ဆော့ဝဲလ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. Apk ကလေးနဲ့ ထွက်ရှိလာတာကြောင့် အသုံးပြု ၇တာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ သွားတာပေါ့.. တစ်ခါတစ်လေ မိမိတို့ အသုံးပြု နေတဲ့ နေရာကနေ ဖုန်းဆက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်..message ပို့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကိုလုပ်ချင်တဲ့အခါ back key နဲ့ သွားရတာကြောင့် နည်းနည်းအဆင်မပြေနိုင်တာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်… ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက အဲဒီ အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ဗားရှင်းအသစ်မှာ နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့
- Added Mobile Data widget
- Added custom color picker
- Major speed optimizations & minor bug fixes
- Notification settings improved (for 4.1+)
မြန်မာအွန်လိုင်း ရေဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်.။ ရက်စွဲအလိုက် Program လေးတွေပါ ပါတဲ့အပြင် သီချင်းတောင်းခြင်း မေးလ်ပို့ခြင်းများပါလုပ်လို့ရပါတယ်..။
Radio ကောင်းလေးမို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ original icon logo လေးတွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းမယ်
..screen shotcut မှာဘဲရပါတယ်
အဲ့ဒီအတွက်ဖုန်းကို root မလုပ်ထားလဲရပါတယ်..android version
ယ်မှာသွားသုံးသုံး အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ Myanmar Gtalk Portable
အရေးမကြီးတဲ့ဆော့ဝဲလေးဆိုပေမယ့် အင်စတောမလုပ်ချင်တဲ့သူ အဆင်ကိုပြေ
လို့ ရုံးခန်းမှgtalk ခိုးသုံးဖို့Memorystick ထဲထည့်ပြီး သုံးချင်မှ ကလစ်လိုက်ရုံပဲ
မတင်ထားတဲ့အခါသုံးလို့ ရတယ် ၊သုံးနေ ကျပုံစံမဟုတ်တော့ဒီဇိုင်းအသစ်လေးနဲ့ 
Posted by zayar htut at Sunday, March 17, 2013 No comments: Links to this post
ပုံမှန် ဆိုရင် Facebook မှာ ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုတွေ upload လုပ် ရတာ အချိန်နည်းနည်းကြာတတ်တာကြောင့် စိတ်မရှည်ချင်ပါဘူး……….ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ဓာတ်ပုံ၊ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေကို facebo...See More
Next Launcher Theme အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
Firefox Os theme တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
တစ်စုံတစ်ရာကို အမြဲတမ်းထပ်ခါထပ်ခါ သုံးရရင် ငြီးငွေ့လာတတ်တာ လူ့သဘာဝပါ…အဲဒီအခါ အသစ်အဆန်းလေးတွေကပဲ လူ့စိတ်ကို လန်းဆန်းစေတာမဟုတ်လား …အခုလည်း Go Launcher Crazy သမားများအတွက် Theme ခပ်လန်းလန်းလေးပါ ..Crazy မဟုတ်တဲ့သူတွေ တောင် သုံးရင် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Theme ပါ…ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို မီးလေးတွေ ဖုန်းလွှမ်းသွားမယ်
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ဖုန်းမှာ Go Launcher ကို အရင် ထည့်ထားရပါမယ်…….
Full Screen Caller ID PRO အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Updtae လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဖုန်းလာတဲ့အခါ ပုံအပြည့်နဲ့ မြင်ရတဲ့ App ပါ
တစ်စုံတစ်ရာကို အမြဲတမ်းထပ်ခါထပ်ခါ သုံးရရင် ငြီးငွေ့လာတတ်တာ လူ့သဘာဝပါ…အဲဒီအခါ အသစ်အဆန်းလေးတွေကပဲ လူ့စိတ်ကို လန်းဆန်းစေတာမဟုတ်လား …အခုလည်း Go Launcher Crazy သမားများအတွက် Theme ခပ်လန်းလန်းလေးပါ ..Crazy မဟုတ်တဲ့သူတွေ တောင် သုံးရင် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Theme ပါ……နံနက် အာရုံကျင်းချိန်ကို တောထဲမှာ ဖမ်းယူရိုက်ကူးထားတဲ့ Themes လေးမို့ အရမ်းမိုက်ပါတယ် ..အရောင်ကလည်း အစိမ်းရင့်ရောင်(Deep Green) လေးဖြစ်တာမို့ မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်စေမှာအမှန်ပါ… Themes တွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ (6) မျိုးတောင်ပေးထားသလို Memory cleaner ၊ Hide app setting တွေတောင်ထည့်ပေးထားတာကြောင့် သုံးစွဲသူ အကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပါ …ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ဖုန်းမှာ Go Launcher ကို အရင် ထည့်ထားရပါမယ်…….
ဖုန်းထဲမှာသုံးဖို့အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန်သစ် SM3 wordfinder ပါ
ဒီဟာက ဖုန်းထဲကိုထည့်တဲ့ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာအဘိဓာန် နောက်တမျိုးပါ။သုံးချင်ရင်
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - sm3wordfinder Eng-Myan အဘိဓာန်
ဒီဟာက နောက်တစ်မျိုးပါ- Myandroid အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန်
Posted by zayar htut at Saturday, March 16, 2013 No comments: Links to this post
Android ဖုန်းထဲမှာ ပစ်ခတ်တိုက်ခတ် ကစားလို့ ကောင်းတဲ့ World War II
ဆော့လို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် ကစားတာက လေယာဉ်ကို လက်နဲ့ နေရာပြောင်း
ရန်သူဘက်က လေယာဉ်ကို တိုက်ခိုက်ရပါတယ် ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် တိုက်လေယာဉ်
တွေပါ ။ ဟိုးအရင်က Nokia N96 မှာ ဖလမ်းဖလမ်းထတဲ့ Sky Force နဲ့ တူနေတယ်
ပစ်ရတယ် ကျဉ်ဆံတွေ ဗုံးတွေယူရတယ် ။ပစ်ပုံကလည်း လွယ်နေတော့ ပျင်းနေရင်
ဒီဟာလေး ယူပြီး ဆော့ကြည့် ။ Medifire က တင်ထားပါတယ် ။ Market မှာ မမြင်...။
ဒီမှာ Download ယူ- Word War II ( ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် တိုက်လေယာဉ် ဂိမ်း )
Youtube က သီချင်းတွေ Phone ထဲကအလွယ် Download ယူနည်း - 2
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဟိုနေ့ ကတင်တာထက် ပိုပြီးတော့ ကောင်းတယ် ဘာလို့ လည်းဆို
လိုင်းမကောင်းလည်း ဒေါင်းလုပ်ယူလိုရတယ် ဟိုနေ့ ကတင်တဲ့ဟာက ယူလို့ မရဘူး
ဒီဟာက ဆော့ဝဲဖွင့်တာနဲ့ Youtube မှာ ပေါ်ပျူလာဖြစ်နေတာတွေ တန်းပြီးပေါ်တာ
ပီးမှ လိုချင်တာကို သီချင်း စာရိုက်ရှာရတာ ။ လေးဖြူရဲ့ အလွမ်းများ ဆွဲထားတယ်
တကယ့်ဖလမ်း ဖလမ်းလေးမလို့ဖုန်းကနေ သုံးသူမျာကို လက်တို့ လိုက်ပါတယ်...။
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ = Mobile Phone Youtube Downloader
မရခဲ့သည်ရှိသော် မူရင်း - http://www.easytube.me.
လုံးဝမရခဲ့သည်ရှိသော် မေးလိပ်စာကိုတောင်း- zwmnna@gmail.com
မြန်မာဘာသာအပြင် တခြားဘာသာ ၂၀၀ ကျော် ရေးနိုင်ပြီ
Batch File Programming ပိုင်းလေ့လာနေတဲ့ သူများအတွက် ဒါလေးက အထောက်အကူပြု့ မယ်လို့ 
မျှော်လင့်ပါတယ်.. လေ့လာစညီကို တွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by zayar htut at Sunday, March 10, 2013 No comments: Links to this post
G-Mail (G-Talk) ကို Crack ဖို့ဒါမှမပာုတ် Hack ဖို့ဆိုရင်
အဲကောင်လေးကတော့ Cracker Software ကို သုံးပြီ မေးတွေကို Crack နည်းလေးပါ။ ကိုမင်းစိုးရာ ဇာဆီက ကျွှန်တော် ယူလာလေးပါ။ သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
Facebook အသုံးပြုနည်းအသေးစိတ်ကို ရေသားထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါခင်ဗျား။
Mobile ကနေ computer ကို network ချိတ်နည်း များအပြင် mobile code များကိုလည်း လေ့လာ နိုင်ပြီး
ကိုပိုင် ၀က်ဆိုဒ် လေး လုပ်ချင်သူများအတွက် အခြေခံ အချက်လေးများကို ရှင်းပြထားသော စာအုပ်လေးပါ ခင်ဗျား...အရင်က ကိုယ်ပိုင် Blog တည်ဆောက်နည်း စာအုပ်ကို အောက်မှာ တင်ပေးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Skype အသုံးပြုနည်း စာအုပ်လေးပါ။
WiFi လွင့်နည်း စာအုပ်လေးပါခင်ဗျား။ အရင်က ကျွှန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးမဟုတ်ပဲ့ အပျော်တမ်းအတွက် wifi ချိတ်ဖို့ဆို ပိုက်ဆံကုန်ကျများတဲ့ အတွက် လူတော်တော်များများ က wifi ကို မသုံးနိုင်ကျပါဘူး။ ခုတော့ ဒီလိုစာအုပ်လေးတွေက လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်လာပါပြီ လို့ထင်ပါတယ်။ wif လွင့်မယ် အကွာအဝေး limit တွေ နဲ့ ချိတ်နည်းတွေကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါခင်ဗျား.
Flash Song သီချင်းလေးတွေ လုပ်ချင်သူများမတွက် ကိုသူရအောင် ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါခင်ဗျား။ Naing ဆိုဒ်တွေ ချစ်သူမြ်ုတော်တွေ ဘာတွေမှာ တင်ထားတဲ့ သီချင်းလန်းလန်းလေးတွေ ကိုယ်တိုင်လေး လုပ်ချင်ကြသူများအတွက်ပါ ဖိုင်ဆိုဒက သေးငေးလေးဆိုတော့ အဆင်ပြေကြမှာပါ။ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကစာ ယူသွား ကြပါ ခင်ဗျား.
You Tube အသုံးပြုနည်းလေးပါခင်ဗျာ။ You Tube ကတော့ လူတိုင်းနဲ့ အကျွှမ်းဝင်ပြီးသား ဖြစ်လို့ ဘာဘာ ညာညာ မရေးတော့ပါဘူး ။ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကသာ ယူသွား ကြပါခင်ဗျား။ လင့်သေနေရင်လည်း comment ပေးပြီး ပြန်တောင်း နိုင်ပါတယ်။ credit တွေ မပေးနိုင်လို့ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ၊ ကျားဆရာ၊ မဆရာ အားလုံးကိုလည်း နည်းပညာစာအုပ်များ စုစည်းမှုမှ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ. ကိုယ်ကျိူးအတွက်မဟုတ်လို့ ခွင့်လွတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း :D
ဒီတစ်တော့ Gtalk အကြောင်းလေး သီးသန့် စာအုပ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ဗျာ...သုံးနေကြလို့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့ သင်မသိသေးတာတွေလည်း ပါချင် ပါမှာဗျ:D..(မသိသေးသူများ အတွက်သာ) :P လန်းလန်းလေးတွေ ဘာတွေ လုပ်လို့ ရသေးလည်း ဆိုတာ ကို သိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ....
Video Converter လေးပါ ကွန်နက်မကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
အဆင်ပြေအောင် MB နည်းတာလေး ရွှေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by zayar htut at Saturday, March 09, 2013 No comments: Links to this post
ဒီဆောစ့်ဝဲလ်က Free ပေးပါတယ် အင်တာနက်လိုင်းကောင်းဖို့တော့ လိုတယ်ဗျာ
အွန်လိုင်းကနေ ရုပ်ရှင်တွေ သီချင်းတွေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ် ပြီးတော့
အွန်လိုင်းဂိမ်းလည်း ကစားလို့ရပါတယ် သီချင်းကို MP3 ဖိုင်ပြောင်းပြီးတော့လည်း ယူနိုင်ပါတယ်
Youtube ထဲက သီချင်းတွေ တွေကို အလွယ်တကူ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
အားကစား လိုင်း နဲ့ အခြား လိုင်းတော်တော်များများကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
http://www.ziggytv.com/faqs.php မှာ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
Posted by zayar htut at Wednesday, March 06, 2013 No comments: Links to this post
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကစားနေတဲ့ ဘယ်ဘောလုံးပွဲကိုမဆို မိမိတို့ Android phone ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု အားပေးနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ…..ဒီဆော့ဝဲလ်လေးထည့်ထားပြီး Match list ဆွဲချ လိုက်တာနဲ့ တစ်နေ့ တာ ကန်မယ့် ပွဲတွေ ကို ထွက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ….ဒါအပြင် နာမည်ကျော် အားကစားရုပ်သံလိုင်း ESPN , FOX တို့ပါ ပါတာကြောင့် ဆောင်ထားဖို့ လက်မနှေးသင့်ပါဘူးခင်ဗျာ.. ….ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပွဲကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အသင်းကို အားပေးကြရအောင်လားဗျာ……
မှာလေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်ကလိပ်စာမှာ၇ယူနိုင်ပါတယ်
Download>>> mirrorupload (or)zippyshare
Flash player ဖုန်းထဲမှာ မပါတဲ့ သူများကတော့ ဒါလေး install ထားမှ ကြည့်လို့ရပါမယ်
မိမိဖုန်း Status Bar အလန်းလေးတွေပြောင်းချင်သူများအတွက် Super Status Bar 0.14.2b လေးလာပါပြီ။
Size - 2.54 MB
Current Version: 0.14.2b
ဒီကောင်လေးက ဖုန်း Status Bar (ဖုန်းအပေါ်ဆုံးကအတန်းလေး) ကိုဒီဇိုင်း ဆန်းဆန်းလေးတွပြောင်းပေးမယ့် Andriod App လေးပါ။ အပေါ်ကပုံလေးလိုပေါ့။ စိတ်ဝင်စားရင်
အောက်မှာယူလိုက်ပါ . . . .
Super Status Bar 0.14.2b on Android Market
Download Super Status Bar 0.14.2b
Posted by zayar htut at Monday, March 04, 2013 No comments: Links to this post
မိမိဖုန်း Root လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Root မလုပ်ရသေးပါက ဒီမှာ သွားပြီးလုပ်ပါ။
မိမိဖုန်းရဲ့ porcessor ကနိမ့်နေရင် ဂိမ်းအမြင့်စားကြီးတွေ ကစားရင်လေးနေတတ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ဂိမ်းကစားရတာလေးနေခြင်းကို မြန်အောင်လုပ်ပေးမယ့် Android App လေးပါ။ ဂိမ်းကစားနေရင်း ဖုန်း battery မြန်မြန်ကုန်ခြင်းကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်အောက်မှာယူသွားလိုက်ပါ . . . .
Gaming Modes က ၄ မျိုးရှိပါတယ်။
Ultra Gaming Mode က အမြင့်ဆုံးပါပဲ။
ဖုန်းဒီဇိုင်းကို လန်းလန်းလေးသုံးချင်သူများအတွက် Hi Launcher 1.8
Android အတွက်ပါ။ ဒီကောင်လေးကိုလူတိုင်း မသိလောက်သေးဘူးထင်တယ်။
သိတဲ့သူပဲရှိရှိ မသိတဲ့သူပဲရှိရှိ တင်ရမယ့်တာဝန်ကတော့ ကျွန်တော့်တာဝန်ပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက မိမိဖုန်းထဲကိုသွင်းလိုက်ရင် မိမိဖုန်းကအရင်ဒီဇိုင်းထက်
အစပေါင်းများစွာ လန်းသွားမှာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အောက်မှာပုံလေးနဲ့ပြထားတယ် . . . .
မိုက်တယ်မှလား .... ကဲ .... ဖုန်းကိုလန်းလန်းလေဖြစ်ချင်ရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းပေတော့။
Hi Launcher 1.8 on Android Market
Download Hi Launcher 1.8
wClock Widget Full v2.0 လေးနဲ့ မိမိဖုန်းမှာ နာရီဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေထည့်မယ်။
Android ဖုန်းသုံးသူများအတွက်သတင်းကောင်းလေးပေါ့။ မိမိဖုန်း Desktop မှာ နာရီဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေး
တွေနဲ့ကြည့်ချင်သူများ wClock လေးပါပြီဗျာ။ နာရီဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်း မျိုးစုံပါပဲ ... Graphic လည်း
တော်တော်ကောင်းတယ်။ wClock လေးကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . . .
YouTube က ဗီဒီယိုတွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဗီဒီယို Format နဲ့ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလော့ လုပ်နိုင်မယ့်နည်း
ဒီနည်းလေးကတော့ YouTube က ဗီဒီယိုတွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဗီဒီယို Format နဲ့ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင် မယ့်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Converter ဆော့ဝဲလ်နဲ့ချိန်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ပိုင်တယ်နော်။
ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို အောက်မှာပုံနဲ့ Step by Step ပြထားပါတယ် ....
ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့နည်းအတိုင်းလုပ်ပြီးမှ ... ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဗီဒီယိုနဲ့ ပြန်စမ်းသပ်ပေါ့။
အောက်က URL ကိုကူးပါ။
ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ခုနကဆိုဒ်ထဲကိုသွားပြီး .... အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံထဲကအတိုင်းဆက်လုပ်ပါ။
http://youtube.com/watch?v=gWIkiI_UmeE ဒါကခုနက URL ပါ။ အရှေ့က http:// ကိုဖြုတ်ပါ။
youtube.com/watch?v=gWIkiI_UmeE ဒီအတိုင်းပေါ့။ ပြီးရင်အဲဒါကိုကော်ပီ ကူးပြီးအောက်က ပြထားတဲ့နေရာမှာ Paste လုပ်ပါ။ ထို့နောက် Download ကိုကလစ်။
အပေါ်ကပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။ More ကိုနှိပ်လိုက်ရင် နောက်ထပ် Video Format တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ More ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။
ကိုယ် ဒေါင်းလော့လုပ်ချင်တဲ့ ဗီဒီယို format ကိုကလစ်ပြီးဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ Internet Download Manager ရှိရင် Internet Download Manager နဲ့ ဒေါင်းလော့လုပ်လို့မရပါဘူး။ တကယ်လို့ Internet Download Manager နဲ့ဒေါင်းလော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပါနည်း အတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ...
ကိုယ်ဒေါင်းလော့လုပ်မယ့် လင့်ကို Right Click ပေးပြီး Copy Link Location ကိုကလစ်ပါ။
ထို့နောက် Internet Download Manager ကိုဖွင့်ပြီး Add URL ကိုကလစ်ပြီး ခုနက ကူးထားတဲ့
URL ကို Paste လုပ်ပါ။ ပြီးရင် OK နှိပ်ပါ။ ဒါဆို Internet Download Manager နဲ့ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။